Zvese zvaunofanirwa Kuziva nezve Tadalafil - Buyaas
1. Chii chinonzi Tadalafil poda?
Tadalafil powder (171596-29-5) mushonga unorayirwa unowanikwa mune dzakasiyana dzemuromo mafomu akadai sepiritsi uye hupfu. Mushonga uyu unowanikwa pamusika pasi pezita dzakasiyana dzemazita seAdcirca neCialis. Zvakare, tadalafil iripo mune yayo generic fomu. Nekudaro, iwe hauto kurairwa kushandisa iyo generic tadalafil poda sezvo inogona kushaya simba rose rekutanga remishonga; saka, iwe unofanirwa kuve wakanyatso chenjera paunenge uchitenga mushonga uyu se tadalafil. Ita shuwa kuti iwe unotenga yakakodzera tadalafil fomu yemigumisiro iri nani. Chiremba wako achakutungamira pane uye kupi uye kupi yekutenga mhando Tadalafil poda.
Tadalafil (171596-29-5) inoshandiswa pasi pezita rakasarudzika mazita ekurapa hwakasiyana mamiriro ehutano. Semuenzaniso, Cialis inonyanya kushandiswa pakurapa kwe erectile dysfunction kana kushaya simba muvarume pamwe ne benign Prostatic hypertrophy, inowanzoidzwa senge yakawedzera prostate. Kune rimwe divi, Adcirca, iyo zvakare imwe tadalafil brand, inoshandiswa pakurapa kwepemoni arterial hypertension. Adcirca inoshandiswa zvakare kuvandudza kugona kwemuviri muvhurume nevakadzi vari kunetseka kubva muhosha yemapermary arterial.
Zvinogaro kurairwa kuti utore mushonga uyu pasi pekutungamirirwa nachiremba wako kuti usasangana nemhedzisiro yakaipa. Kunyangwe ungave nyore sei kuwana tadalafil poda hautore iyo usingaongororwa kurapwa. Just nekuti mushonga wave uchishandira shamwari yako, haisi otomatiki inounza mhando yemhedzisiro pauri. Miviri yavanhu yakasiyana, uye ndosaka chiremba wako achifanirwa kusarudza iyo dosi yakanaka kwauri mushure mekutarisisa hutano hwako. Kana ukashandiswa zvisirizvo kana kuwedzeredza, tadalafil inogona kutungamira nekukuvadza kwakanyanya kunogona kudhura uye kudzora dzimwe nguva zvachose.
2.Tadalafil poda inoshanda sei?
Tadalafil poda iri pakati pemishonga iyo ndeyekirasi yezvinodhaka inozivikanwa se phosphodiesterase rudzi 5 inhibitors (PDE5). Mishonga yese iri mukirasi ino inoshanda nenzira imwechete uye inoshandiswa nemishonga yekurapa zvakada kufanana nehutano hutano. Kazhinji, zvinodhaka zvakaiswa muzvikwata zvakasiyana izvo zvinodaidza makirasi. Mapoka acho anoumbwa nemishonga ine zvivakwa zvakafanana uye zvinoshanda nenzira imwechete. Tadalafil inobatsira mukuzorora kwemabhesi uye mhasuru dzeprostate, iyo inovandudza zviratidzo zvako zve benign prostatic hyperplasia (BPH) inosanganisira; kurwadziwa kana uchimhanyisa, kunetseka uchimuda uye nekukurumidzira kana kugara uchidikanwa kudaidzira.
Mushonga uyu zvakare unokwidza kuyerera kweropa rako kumuviri, izvo zvinobatsira mukuwana uye mukuchengeta erection. Tadalafil inonyanya kushandiswa kurapa kwekushaiwa kwemaitiro muvarume, asi zvinongokubatsira kana uchinge wamutsa bonde. Penal erection inoitika kana penis ichinge yazara neropa. Kugadziriswa kunoitika mushure mekunge maropa eropa anotarisana neropa kudonha uye nekuvandudza kuwedzerwa kweropa apo iwo akapiwa basa rekubvisa ropa kubva muchibvumirano chepenisi. Kana iro ropa riungana muhomwe yako, rinokonzera erection. Zvidzidzo zvakaratidza tadalafil inokwidziridza kugona kusvika kune erections dzakaoma uye dzinochengetwa ruzhinji rwevarume vane erectile dysfunction.
Kune PAH, ichi chinodhaka chinozorodza tsinga dzako dzeropa mumapapu ako kuwedzera kubuda kweropa, izvo zvinogadzirisa kugona kwako kuita muviri. Paunenge uchitora mushonga uyu, iwe, iwe, unenge uine simba rakakwana rekushanda kwemaawa marefu uye kuzadzisa zvinangwa zvako mukati menguva pfupi pfupi inokwanisika.
3.Nzira yekutora Tadalafil poda?
Mazano eMedical ekuti iwe unofanirwa kutora tadalafil poda mamineti e30 usati wazviisa muchiitiko chebonde. Mushonga uyu unobatsira iwe paunomutora pamwe kana pasina chikafu. Iwe unofanirwa kutora tadalafil chete kana iwe uchida kurara. Nekudaro, kune varume vangada kuita zvepabonde kamwe chete kanopfuura katatu kana kupfuura muvhiki, ivo vanokwanisa kuenda kunotora mushonga wezuva nezuva, uyo unouya mune maviri dosi, 2.5mg uye 5mg. Mushonga unokurudzirwa pazuva ndeye 10mg, asi kana zvisina kukwana iwe, ipapo mushonga wako unogona kuwedzera mushonga ku20mg. Nekudaro, bvunza chiremba wako usati wachinja dhosi kuti udzivise epamberi tadalafil poda mhedzisiro.
Tadalafil inofanira kungotorwa kamwe chete maawa e24. Ukasawana erections iwe yaunotarisira, usawedzera imwe dosage mukati mezuva rimwe chete. Zvakajairika kune yekutanga-nguva tadalafil vashandisi kuona kunonoka mukuwana mhedzisiro yaunoda. Miviri yavanhu yakasiyana, sezvambotaurwa pakutanga mune ino nyaya. Vamwe vanhu vanogona kuona iyo tadalafil powder mhedzisiro mukati me30 maminetsi ehureko vamwe vamwe ivo vachiona kunonoka. Nekudaro, vanachiremba vanokurudzira kuti utore iwo mushonga weinodhaka kwemazuva masere usati wafunga kuenda kunotora mushonga wepamusoro kana imwe sarudzo yekurapa.
Iwe haufanire kutora tadalafil poda uye chero imwe erectile dysfunction zvinodhaka kana mafuta. Naizvozvo, zivisa chiremba wako kana iwe uri kutora chero imwe mishonga yeEU usati watanga yako tadalafil dosage. Kunyangwe paine akasiyana tadalafil alternatives pamusika, sildenafil, Viagra, Spedra, uye Cialis, haufanirwe kuisa njodzi yekutora chero ipi neye tadalafil; inogona kutungamira kune yakaipa mativi. Tora imwe chete panguva asi pasi pekurairwa nachiremba wako. Kunze kwezvo, kana iwe uri kutora chero nitrate mushonga kurapa mwoyo matambudziko kana chipfuva maronda akadai isosorbide dinitrate, nitroglycerin, isosorbide mononitrate, uye zvinodhaka zvinodhaka seva poppers, iwe zvakare unorayirwa kuti usabve kutora tadalafil poda. Kubatanidza tadalafil neechero nitrate mushonga kunogona kukonzera kuderera kukuru kweropa.
Kuti uve parutivi rwakachengeteka, zivisa chiremba wako nezve ese mishonga yauri kutora kana kana iwe uri pasi peechero kurapwa usati watanga kutora tadalafil. Muchiitiko kana iwe ukasangana erections anorwadza, kana erections anotora kupfuura 4 maawa zvakare zivisa mushonga wako nekukurumidza. Kuwedzeredzwa erections kunogona kukuvadza yako penis tsandanyama. Zvakare, kana iwe usingarwari ne tadalafil, usazviisa pangozi kuitora uye ita kuti chiremba wako azive kukuitira imwe nzira yakachengeteka. Tadalafil mushonga une simba kwazvo kune erectile dysfunction, asi unofanirwa kutorwa nekuchengetwa kwakawanda kuti udzivise mhedzisiro. Namatira kune yakaderedzwa madhesi kuti uwane zvirinani mhinduro.
4.Tadalafil poda Inoshandisa
Kazhinji, tadalafil poda inoshandiswa pakurapa kwechirume chinetso chebonde matambudziko akadai sekusabereka uye erectile dysfunction. Kunze kwekuvandudza kurudziro yebonde, tadalafil zvakare inovandudza kuyerera kweropa mukati memukati memurume kuti ibatsire murume kuwana uye kuchengetedza erections kwenguva refu. Mushonga uyu unozivikanwa nekubatsira varume vacho kuti vave neruzivo rurefu rwebonde. Vashandisi veTadalafil vanonakidzwa neakaoma uye zvakareba erections. Nekudaro, mushonga unofanirwa kutorwa kamwe chete pazuva uye 30 maminetsi usati waita bonde.
Kune rimwe divi, tadalafil poda inoshandiswawo pakurapa kwezviratidzo zve benign prostatic hyperplasia (BPH) zviratidzo. Mushonga uyu unodzoreredza zviratidzo zveBPH senge rwizi husina kusimba, kuoma kwekutanga kuyerera mukati, uye kazhinji kurwiswa, kunyanya pakati pehusiku. Pano tadalafil inokubatsira nekuzorora iro rakatsetseka bladder uye prostate tsandanyama. Zvisinei, regai kutenga uye kutanga kushandisa tadalafil upfu kunyange kana iwe kuona BPH zviratidzo usati rakagara kuongorora zvokurapa. Rangarira mushonga unofanirwa kuve wakarairwa nanachiremba wenguva dzose.
Chiremba anotaurawo tadalafil poda kuvanhu vane pulmonary arterial hypertension (PAH). Aya ndiwo mamiriro ezvinhu apo kune yakawandisa yeropa mumidziyo yako inotakura ropa kuenda kumapapu, uye inotungamira kune chizungu, kufema kupfupi, uye kuneta. Vanhu vazhinji vanotambura nechirwere ichi vanoona zvakaoma kuzviita nguva nenguva. Nekudaro, nhau dzakanaka ndedzekuti tadalafil poda inoita basa rakakosha mukubatsira varwere vePAH kuti vaite basa ravo kunze nekunyaradza nekudzora mamiriro ezvinhu mumuviri.
Nekudaro, tadalafil haizokuchengetedza iwe kubva kuzvirwere zvinotapuriranwa pabonde, zvinosanganisira hepatitis B, HIV, syphilis, uye gonorrhea, pakati pevamwe. Zvese mune zvese, ita shuwa kuti une bonde rakachengetedzwa uye rakadzivirirwa nguva dzese. Muchiitiko kana usina chokwadi nezvekuti ungazvidzivirira sei panguva yebonde, unogona kushandisa kondomu rexx. Kuti uwane rumwe ruzivo, bvunza chiremba wako wemishonga kana chiremba.
5.Tadalafil poda dosi
Tadalafil dosage inogona kubva kune mumwe mushandisi kuenda kune imwe, zvichienderana nechikonzero chekushandiswa kwayo. Hupenyu hwako hwehutano uye mapindiro anoita muviri wako kune uyu mushonga zvinopesvedzera zvakare yako dosage. Nekudaro, zvinogara zvichirayirwa kuti utange neakaderera dosage dosage, inogona kuwedzerwa gare gare nachiremba wako mushure mekuongorora kufambira mberi kwemishonga. Usambofa wakagadzirisa dhivhosi yacho pasina kuzivisa mushonga wako nekuti inogona kutungamira mukukuvara kwakanyanya kana kutadza kuunza zvanga zvichitarisirwa. Tadalafil poda dosi ndizvo zvinotevera;
Iyi tadalafil poda dosage inoitirwa murume kunetseka kuwana uye kusimbisa erections dzakaoma. Mushonga wekutanga wakakurudzirwa ndeye 10mg iyo inofanirwa kutorwa pamuromo kamwe chete pazuva kana 30 maminetsi usati wapinda muchiitiko chebonde. Kana iwe ukasawana mhedzisiro, iwe unofanirwa kuramba uchitora yako yemaitiro mazuva anosvika masere, zvino shanyira chiremba wako kuti agadzirise iyo dosi. Vamwe vanhu vanoona kunonoka kutora mhedzisiro, kunyanya yekutanga tadalafil vashandisi. Nekudaro, iyo dosage inogona kuwedzera kune 20mg pazuva. Kugadziriswa kwe tadalafil poda dosage inotangira ku5 kusvika ku20mgs iyo inofanirwa kutorwa kamwe chete pazuva sezvinodiwa kana usati waita zvepabonde. Tadalafil ye ED dosage inoenderana nekushivirira kwega wega uye kushanda kwayo. Iyo dosage inogona kuderedzwa zvakare kune vashandisi vanowana yakawedzera mhedzisiro kunyange mushure mekutora yakaderera dosage ye10mgs pazuva.
Kwemazuva ese tadalafil poda yekushandisa, yekutanga dhesi yemuromo kamwe pazuva ndeye 2.5mg uye inofanira kutorwa nguva yakafanana mazuva ese, pasina kufunga nezvebonde nguva yekuita. Iyi dosi yakagadzirirwa vashandisi vangada kurara katatu kana kupfuura pavhiki. Pano, iyo yekuchengetedza dosage inotangira ku2.5 kusvika ku5mgs pazuva uye inofanira kutorwa nemuromo kamwechete pamaawa e24.
Tadalafil poda dosage yeBinign Prostatic Hyperplasia (BPH) uye erectile dysfunction (ED)
Iwe unogona zvakare kutora tadalafil kubata maviri mamiriro kamwechete, izvo zvinogona kuve zvakanaka nhau kune vashandisi. Kuti ubudirire kurapwa kweEU uye BPH, iyo inokurudzirwa dosage iri 5mg zuva nezuva dosage, iyo inofanirwa kutorwa pamuromo inenge nguva imwe chete. Pano, iwe haufanire kufunga nezve nguva dzako dzebonde asi kungoomerera kumirayiridzo yemyero kuti uwane mhinduro dzaunoda. Tora dosage yako kusvikira chiremba wako akurayira kuti umire mushure mekutarisa kufambira mberi kwemishonga.
Tadalafil poda Pulmonary Hypertension dosage
Kuti ubudirire kurapwa kwePulmonary Hypertension, iwe uchafanirwa kutora tadalafil poda 40mgs kamwe pazuva. Iwe haufanire kukamuranisa iyo 40mgs dosage muzuva rimwe chete kana kuwedzera kana kuderedza kana kudhonza.
Adult tadalafil dosage yeBinign Prostatic Hyperplasia
Kune BPH kurapwa, iwe unofanirwa kutora 5mgs muromo tadalafil dosage kamwe pazuva uye ita chokwadi chekutora chinenge nguva yakafanana zuva rega rega kweanenge 26 mavhiki. Chiremba wako anokwanisa zvakare kuwedzera kana kuderedza zuva zuva nezuva zvichienderana nekuti muviri wako unopindura sei kune iwo madiki mavhiki ekutanga. Kana pane chero yemhando yepamusoro mhedzisiro gara uchionana nachiremba wako nguva isati yanyanyisa mamiriro acho ezvinhu.
6.Tadalafil poda hafu yehupenyu
Tadalafil powder hafu upenyu inoramba ichishanda mumuviri wako kwemaawa anenge 36 mushure mekutora dosage yako. Izvo zvinoita tadalafil chisarudzo chakanakisa kune vakawanda vashandisi vari kutarisa kuvandudza ruzivo rwavo rwepabonde. Kutora zuva nezuva tadalafil piritsi inoda kukubatsira iwe kuwana firmer uye zvakare erections mushure mekutora iyo dostage kwemazuva matatu kusvika mashanu ekutanga kushandiswa. Kune varume vasingapindure zvakanaka kune-inoda dosage yakakwira, kutora tadalafil zuva rega reti inobatsira zvakanyanya. Doodges yezuva nezuva yakanakira mukupa zvakanyanyisa kuvandudza mune yako yebonde drive.
Zvinogara zvichirayirwa kuti utore tadalafil poda piritsi kamwe pazuva uye kana iwe ukasawana mhinduro hazvitore mumwe dosage mukati maawa e24. Tadalafil powder mhedzisiro inogona kunonoka kune vamwe vashandisi, asi izvo hazvireve kuti iwe unofanirwa kutora rimwe dhigidhi mukati mezuva rimwe chete. Chekutanga-nguva tadalafil puru vashandisi vanogona kuona kumwe kunonoka, asi nekufamba kwenguva ivo vanowana izvo zvinodiwa erections.
7.Tadalafil poda mativi
Zvakawanda se tadalafil poda mushonga une simba uyo wanga uchibatsira vanhu vamwe pakurapa hutano hwakasiyana mamiriro, kana ukashandiswa zvisirizvo kana kuwedzeredza unogona kukuisa kune mamwe mhedzisiro. Chikuru che tadalafil poda mativi imhaka yekushandiswa zvisirizvo uye kuti muviri wako unopindura sei kune uyu mushonga. Kazhinji, vamwe vanhu vanogona kutadza kunakirwa nezvakabatsirwa nemushonga uyu kunyange mushure mekutora dhigidhi chaiyo. Vamwe vashandisi vanogona zvakare kuona mashoma emigumisiro pane vamwe. Mamwe akajairika tadalafil mativi mhedzisiro anogona kunyangarika nenguva, uye iwo anotevera;
Musoro unowanzoitika panguva yekutora yako tadalafil poda. Unogona kusangana nekushomoka kwemukati, kudzimbira, kusvotwa, kufemera pasi, manyoka uye kukosora. Marwadzo ari kumashure kwako, dumbu, makumbo, kana maoko zvakare akajairika kune vazhinji vashandisi ve tadalafil. Sezvambotaurwa, izvi zvinokanganisa zvinofanirwa kupera mushure mechinguva, asi kuitira kuti zvigare kwenguva yakareba kupfuura zvinotarisirwa kuudza chiremba wako kuti akubatsire kuwana mhinduro. Nhau dzakanaka ndedzekuti dzinenge dzese idzi tadalafil mhedzisiro inogona kudzorwa.
Kune mamwezve mhedzisiro yakakomba iyo iwe yaunofanirwa kutsvaga kurapwa nekukurumidza iwe unotanga kusangana navo, uye inosanganisira;
Kupererwa kwemaonero kana kuona kwakashata paunenge uchitora tadalafil. Vamwe vashandisi vanogona kutanga kusangana nematambudziko muchiono chavo kana vatanga kumwa mushonga uyu, uye kana zvangoitika, fonera chiremba wako munguva pfupi iripo.
Chero shanduko yekuona kwemavara inofanirwawo kutaurwa nekukurumidza kuchipatara chepedyo kana mishonga yako. Vamwe vashandisi vanogona kukura nematambudziko ekuona mamwe mavara, sekuudza mutsauko pakati pegirinhi neblue.
Kunzwa matambudziko, kurira munzeve, kurasikirwa, uye kuderera kwekunzwa zvimwewo zvakakomba mhedzisiro inogona kusangana nemunhu.
Kuwedzeredzwa erections ayo anogara kweanopfuura 4 maawa.
Chipfuva chechipfuva uye kushungurudzika, kudzora ganda kana kufufutirwa, kuyerera, kuyerera kwerimi, maziso, miromo uye kumeso.
Kuoma kwekumedza kana kufema kunofanirwawo kugadziriswa nekukurumidza.
Kukundikana kutaurira chiremba wako nezvepamusoro-yepamusoro mhedzisiro kunogona kutungamira mamiriro asingashandurwe uye dzimwe nguva kunogona kutungamira kurufu. Usazeze kuti ubate nyanzvi dzekurapa kana iwe ukaona chero mhedzisiro yacho. Saizvozvo, usapfuurire nemupimo usingazivise medics yako nekuti inogona kutungamira mukunetseka zvakanyanya kana kukuvadza mamiriro ako. Yese tadalafil mhedzisiro mativi inogadziriswa, uye chiremba wako anokurayira zvichitevedza mushure mekuongorora mamiriro ako.
8.Tadalafil powder kutengeswa
Tadalafil powder Sale inowanikwa pamusika chero mumashopu epamhepo kana makemikari epanyama. Nekudaro, iwe unogona kuiwana pasi peakasiyana mazita mazita seCialis kana Adcirca, zvinoenderana nenzvimbo yako. Ichi chishandiswa chepamutemo chinodhaka mumatare mazhinji, uye haufanirwe kuve nekutya kana uine, uchitenga, kana kunze kwenyika. MuUnited States of America, Tadalafil yakatanga kubvumidzwa mu2003 yekurapa erectile dysfunction kurapwa, uye nekufamba kwemakore zvakaratidza kuti zvinoshanda. Iyo tadalafil poda inowanikwa mune gramu dzakasiyana zvichienderana nehuwandu hwaunoda kubata mamiriro ako.
Iwe wakasununguka kuti tenga tadalafil poda muhuwandu kana kungokwana zuva rako rimwe chete kana mazuva mashoma 'usages zvichienderana nekurudziro yako chiremba. Kune vazhinji vatengesi tadalafil poda vatengesi pamusika nhasi, asi ita shuwa kuti unowana kubva kune anozivikanwa ekugadzira uye mutengesi. Havasi vese vanotengesa vaunowana pamusika vane mhando dzemishonga. Rangarira, kune zviri nani uye nekukurumidza mhinduro. iwe unofanirwa kushandisa mhando tadalafil poda nguva dzose. Iko kune zvakare yakajairika fomu ye tadalafil poda, iyo inogona kushayikwa humwe hunhu uye inogona kunge isingakwanisi zvakakwana kubata chirwere chako.
Muchiitiko kana iwe usina chokwadi nezve kupi kana kuti sei kuwana quality tadalafil powder, saka usatya kutaura nachiremba wako. Vanamazvikokota vezvokurapa ndivo vanhu vakanyanya kukuratidza kwaunowana iwo mishonga yavanokunyorera. Nekudaro, zvinogara zvakanaka kuti uite tsvakiridzo yako kuti uziveakanakisa tadalafil poda vanogadzira uye vanokutengesa vakakukomberedza Ita shuwa kuti iwe unotenga yakarongedzwa zvakakwana tadalafil poda iyo ichaita kuti zvive nyore kwauri kuti uichengete iwe sezvaunopfuurira nedhidhi yako.
9.Ndekupi kwekutenga Tadalafil poda?
Nyika iri kuchinja, uye kusiyana nemamwe mazuva kumashure, unogona atenga tadalafil powder online pane yedu webhusaiti uye tora chigadzirwa chako mukati menguva pfupi pfupi inogoneka. Iwe unogona kuwana yedu saiti kuburikidza neyako smartphone, piritsi, kana laptop uye ita yako yekudekara kweimba yako kana hofisi. Neimwe nzira, iwe unogona achiri kuwana tadalafil poda kubva kune yako yepamhepo kemesi. Nekudaro, isu tinogara tichiraira vatengi vedu kuti vachenjerere zvakanyanya kana uchitsvaga akanakisisa tadalafil powder supporter kungave online kana mumuviri. Vamwe vevatengesi vezvinodhaka vanogona kutengesa zvigadzirwa zvemhando yepasi izvo zvinotadza kuendesa zvawanoda zvozoguma zvoisa pachena kukuvadza kwakanyanya.
Tsvaga kwako nezvekambani yauri kuda kutenga tadalafil powder kubva kuti unzwisise kuti inoshanda sei. Nzira yakanakisa ndeye kutarisa makambani ratidziro uye kuongorora kwevatengi. Iyo ine mukurumbira kambani ichave ine mhinduro dzakanaka uye zvakanaka ratings. Verengai ruzivo rwakasiyana rwevatengi uye ita chisarudzo chine ruzivo. Mutengi anofara anogara achikurudzira vamwe vatengi kumutengesi, uye ivo vakaodzwa mwoyo havazotya kuratidza kutadza kwavo. Usave nekuchimbidza kana uchitenga tadalafil poda, tora nguva yako, uye dzidza vatengesi 'pamwe nevagadziri varipo pamusika. Chiremba wako anogona zvakare kukubatsira iwe pakuona yakanakisa tadalafil mutengesi anotenderedza.
Isu tiri kutungamira tadalafil powder mugovera mudunhu, uye tanga tiri pamberi pemutambo kwemakore mazhinji ikozvino. Isu tinopa zvigadzirwa zvekurapa zvemhando yepamusoro kune vese vatengi vedu uye kugadzira kuburitsa nenguva pane pasirese. Yedu yekushandisa-ine ushamwari webhusaiti inokubvumira iwe kuita yako yekurongeka mukati memasekondi uye kubva chero kupi. Iwe unogona nyore kufambisa kubva kune chimwe chigadzirwa kuenda kune webhusaiti yedu. Zvigadzirwa zvedu zvekurapa, senge tadalafil poda zvakarongedzwa zvakakwana kuti zvidzivise chero kusvibiswa iwe uchiri mukufambisa uye zvakare zvinoita kuti zvive nyore kwauri kuti usunge mushonga. Nekudaro, isu tinogara tichirayira vatengi vedu vese vakavimbika, kuti vasatange kutora zvinodhaka zvedu vasina kuongororwa nachiremba uye nekuwana mishonga chaiyo kubva kunachiremba wezvekurapa.
Kune ese mibvunzo kana kunetsekana nezve tadalafil poda, wakasununguka kutibata nesu chero nguva. Yedu inokwanisa vatengi yekuchengetedza tafura ichagadzirisa zvese zvako uye zvakare kuti ikubatsire iwe kuti uite kuraira pachikuva chedu. Chengetedza hupfu kure nevana uye utore dosage yakakurudzirwa yemigumisiro iri nani. Kana iwe ukasangana nemimwe mhedzisiro, zivisa chiremba wako zano rakawanda uye kutungamirirwa.
10.Tadalafil poda vs Sildenafil Citrate poda
Iyi mishonga miviri ndeye phosphodiesterase-5 (PDE5), uye zvinoreva kuti vanopotsa vashande nenzira imwecheteyo. Iyo tadalafil poda uye sildenafil citrate poda ine zvakawanda zvakafanana, uye ivo vanoshandiswa kurapa kusabereka uye erectile dysfunctions mune varume. Nekudaro, iyo mishonga miviri inogona chete kushanda kana mushandisi anomuka. Paunotevedzera zvese zvirairo zvemurosero, tadalafil uye sildenafil citrate poda inogona kukubatsira iwe kuwana yakasimba uye kwenguva refu erections.
Nezve mashandiro ekuita, tadalafil poda inoshanda mukati me16 kusvika 45 maminetsi mushure mokutora dosage yako. Kune rimwe divi, sildenafil inopa mhinduro mukati memaminetsi e30, uye kana iwe ukatora chikafu chine mafuta mazhinji, zvinogona kukanganisa kushanda kwemushonga. Naizvozvo, sildenafil citrate poda inofanira kutorwa padumbu risina chinhu kuti uwane mibairo iri nani. Vanenge zvese PDE5 inhibitors inoshanda yakafanana. Nekudaro, kunyangwe sildenafil ichibudirira yakamira pa84% uye tadalafil ku81%, varume vazhinji vanofarira kutora tadalafil poda nekuti ine yakawedzera kugara kwenguva refu.
Tadalafil poda inogona kutorwa kana ichidiwa kana zuva nezuva. Kazhinji, iyo tadalafil zuva nezuva dosages ishoma pane iyo inodiwa piritsi. Semuenzaniso, 10mgs ndiyo yekutanga tadalafil dosage pamberi pebonde. Kana yangotorwa, mhedzisiro yacho ichagara kweanenge maawa e36. Chiremba wako anogona zvakare kuwedzera dhisage kune 20mg kana kuideredza kune 5mg kana mhedzisiro isingagadzirisike. Yeyero yemazuva ese, iyo yakakurudzira tadalafil piritsi iyo 2.5mg ye ED uye 50mg kana uchirapa BPH. Ivo vashandisi vanoyambiswawo kuti varege kuwedzera tadalafil dosage pasina kurairwa nachiremba kuti vadzore mhedzisiro.
Sildenafil citrate poda inofanira kutorwa kamwe chete pazuva uye neawa usati wazviisa muchiitiko chebonde. Mushonga wacho unofanirwa kutorwa pane zvaunoda, uye iyo inokurudzirwa dheti ndeye 50mgs, iyo iwe unogona zvakare kutora 30 maminetsi kana maawa mana pamberi pabonde. Mune zvimwe zviitiko, iyo sildenafil citrate powder dosage inogona kuwedzera kune 100mgs kana 50mg dosage ikakundikana kuunza izvo zvaunoda mhinduro. Chiremba wako anokwanisa zvakare kudzikisa dosage ku25mgs kana iwe uchinge uchinge usingatsungirwe mhedzisiro. Kungofanana ne tadalafil, sildenafil citrate poda inofanira kutorwa kamwe chete pazuva kana iwe ukasawana mhinduro mukati maawa e4.
Mishonga miviri iyi, kana yakanyanyisa kana kushandiswa zvisiri izvo, inogona kutungamira mhedzisiro dzakafanana nekukatyamara, kutemwa nemusoro, uye kudzimbira. Nekudaro, kutarisa kwemavara kunonyanya kusangana ne sildenafil citrate poda. Nhau dzakanaka ndedzekuti zvese zvinodhaka zviviri zvinodhaka zvinokona kudzorwa kana ukatsvaga kurapwa nekukurumidza. Inzwa wakasununguka kubvunza chiremba wako kana wemishonga kuti uwane rumwe ruzivo nezve tadalafil poda uye sildenafil citrate poda.